Silken Thomas - N'ime obodo
Silken Thomas, Kildare Town bụ ebe ị ga -aga. Na-anya isi afọ 45 nke nraranye ezinụlọ na-eme maka ọrụ dị mma na nri dị ụtọ maka ndị ọbịa niile. Ije nri ụtụtụ, nri ehihie & nri abalị kwa ụbọchị n'ime ebe mgbakọ na elu ụlọ, ọ bụ ebe kacha mma na-abịa mmiri ozuzo ma ọ bụ na-enwu. N'agbanyeghị oge ọ bụla Silken Thomas kpuchiri gị.
A na -achọkarị ebe a mma nke ukwuu maka ịnabata maka iri nri nkịtị na ahụmịhe iri nri n'oge a. Silken Thomas na -anya isi mbara ala iri nri mara mma iji too ụlọ mara mma nke gbara ya gburugburu.
Ụlọ oriri na ọ restaurantụ alwaysụ na -enye ihe ọhụrụ mgbe niile na -eduga na menu na -atọ ụtọ nke efere mba ofesi jiri mmetụ pụrụ iche. N'afọ 2021, Tripadvisor hoputara ya na 10% kachasị nke ebe nri n'ụwa niile. Ekwesịrị ịnwale na nleta ọ bụla na obodo Kildare.
Silken Thomas nwekwara mmetụ nke ọdịnala ya na mmanya Irish ọdịnala Squire n'ime obi Kildare Town. N'ebe a, a na -enwe ọmarịcha biya biya, mmụọ nchekwa shelf na mmanya mmebe. Zuo ike na ebe a na -edozigharị ọbá akwụkwọ anyị emezigharị ọhụrụ ma ọ bụ mikpuo ụfọdụ ihe egwuregwu bụ Squires wee nwee ọ enjoyụ mkpuchi egwuregwu niile. Squire's bụ isi nkuku egwu egwu dị na Kildare Town na ntụrụndụ ọ bụla na Fraịde, Satọde na ezumike ezumike Bank.
Mgbe ezumike abalị zuru ike zuru ike ma tinye ụkwụ gị n'otu n'ime ime ụlọ iri abụọ na asaa anyị nwere nke ọma na ebe obibi Silken Thomas. Nwee obi ụtọ ịzụ ahịa otu ụbọchị na mpụga obodo Kildare dị na mpaghara yana ọnụ ahịa dị 27% mgbe ị na -ede akwụkwọ, yana ego maka ihe eji enyere ndụ aka dịka National Stud na ubi. Anyị na -enyekwa ebe a na -adọba ụgbọala n'efu maka ndị ọbịa anyị niile.
N'inye ya asambodo ịdị mma site na Tripadvisor na 2021, Silken Thomas na -enye ndị ọbịa ya ahụmịhe dị mma.
Silken Thomas dị nso na ọpụpụ 13 na M7 ma ọ dị na etiti Kildare Town.
Pubs & Ndụ abalị, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, Nri oriri, Nri oriri n’èzí, Egwu dị egwu, Irish / onye Europe, Ime ụlọ naanị, Ezigbo ezinụlọ, 3 Star, Kildare
16, Ahịa Market, Kildare, Obodo Kildare, Ireland.
Mọnde - Sun: 10am - 11pm